မြန်မာ့ရွေးကောက်ပွဲရလဒ် သုံးသပ်ချက် | My Diary
← Mr.Bill Gate ထံသို့ အိတ်ဖွင့်စာ	Ka Nu’ Inn Nuam →	မြန်မာ့ရွေးကောက်ပွဲရလဒ် သုံးသပ်ချက်	Dec 5
( ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီး Conflict Prevention and Peace Forum က အစီရင်ခံစာတစ်ခု ထုတ်ပြန် ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအစီရင်ခံစာကို နိုင်ငံတကာ ရွေးကောက်ပွဲ လေ့လာမှု စံနှုန်းများကို ကြိုတင်လေ့ကျင့် ပေးထားတဲ့ ပြည်တွင်းက နိုင်ငံသား ၁၇၅ ဦးက နိုင်ငံအနှံ့မှာ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပပုံကို လေ့လာတွေ့ရှိချက် တွေကို အခြေခံပြီး ပြုစုထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ စာတမ်း ပြုစုသူက မြန်မာနိုင်ငံမှာ အိုင်အယ်လ်အို ဆက်ဆံရေး အရာရှိ အဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့ပြီး မြန်မာစကား ကောင်းကောင်း ပြောတတ်တဲ့ Richard Horsey ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ စာတမ်းထဲက အရေးကြီးတဲ့ အပိုဒ်များကို ဆီလျော်အောင် ကောက်နှုတ် ဘာသာပြန် ဖော်ပြ လိုက်ပါတယ်။ စာတမ်း အမည်က Outcome of Myanmar Election ဖြစ်ပါတယ်။ )
အခန်း ၂ ။ ရွေးကောက်ပွဲနေ့။ စာတမ်းမှာ ရွေးကောက်ပွဲနေ့ အခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲနေ့မှာ မဲပေးမှုတွေက အေးအေးချမ်းချမ်း ရှိတယ်။ အားလုံးက ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်ပဲ။ ငြိမ်သက် လွန်းအား ကြီးတယ်လို့တောင် ဆိုနိုင်တယ်။ စည်းမျဉ်းနဲ့ မညီတဲ့ ကိစ္စတွေ အများကြီး ရှိတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေလည်း ထွက်လာတယ်။ တကယ်တော့ ဒီသတင်းမျိုး မထွက်ဘူးဆိုရင် ထူးဆန်းတယ်လို့ ပြောရမှာ ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် လေ့ကျင့် ပေးထားပြီး စိတ်ချရတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်ရေး သမားများရဲ့ ကွန်ယက်အဖွဲ့ ကတော့ ရွေးကောက်ပွဲ မဲပေးပုံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အခုလို ကောက်ချက်ချပါတယ်။
မဲပေးမှုအတွက် စီမံ ဆောင်ရွက်မှုတွေက ယျေဘူယျအားဖြင့် ချောချောမောမော ရှိပြီး စည်းမျဉ်း အများစုကိုလည်း လိုက်နာ ကြပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲကို စောင့်ကြည့်နေတဲ့ အဖွဲ့ဝင် ၇၁ % က မဲပေးမှုရတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ် တွေကို ချောချောမွေ့မွေ့ ထိထိရောက်ရောက် လုပ်သွားကြတယ်။ အဲဒီနေ့ မဲရုံပိတ်တဲ့ ညနေ လေးနာရီ မှာတော့ ဒီမိုကရေစီ ပါတီတွေက ကိုယ်စားလှယ် တွေဟာ စိတ်ဓာတ်တွေ တက်ကြွ နေကြပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲ အကြိုကာလမှာ ကန့်သတ်မှုတွေ အတော် များတဲ့အတွက် သူတို့ ပါတီတွေဟာ အများစု နေရာ အနိုင်မရနိုင်ဘူး ဆိုတာ အစထဲက မျှော်လင့် ပြီးသားပါ။ ဒါပေမယ့် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်နဲ့ ပြည်ပက အတိုက်အခံ တွေက သပိတ်မှောက်ဖို့ တောင်းဆိုနေတဲ့ ကြားက မဲလာပေးသူတွေ များခဲ့တဲ့ အတွက်၊ လူတွေဟာ သူတို့ နှစ်သက်တဲ့ ပါတီကို မဲပေးဖို့ ဆုံးဖြတ် ခဲ့ကြတဲ့အတွက် သူတို့ စိတ်အား တက်ကြွ နေကြတာပါ။ မဲရုံ ပိတ်ပြီးတဲ့နောက် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း များရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေ၊ မဲရုံစောင့်တွေနဲ့ အများပြည်သူတွေ ရှေ့မှာ သက်ဆိုင်ရာ မဲရုံအလိုက် မဲတွေ ရေတွက် ကြပါတယ်။ ကနဦးပိုင်းမှာ ဒီမိုကရေစီပါတီ များရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေက သူတို့ကို ထောက်ခံသူ အတော် များတယ်လို့ ပြောခဲ့ကြတယ်။ မဲပေးမှုကို စောင့်ကြည့်နေတဲ့ ပြည်တွင်း အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုကတော့ ညသန်းခေါင် အချိန် ခန့်မှန်းချက် ထုတ်ပြန်ရာမှာ ဒီမိုကရေစီ ပါတီတွေ အနေနဲ့ ၀င်ပြိုင်တဲ့နေရာများရဲ့ ၄၀%မှာ နိုင်နိုင်တယ်။ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ကလည်း ၀င်ပြိုင်တဲ့နေရာ ၄၀% မှာ နိုင်နိုင်တယ်။ တစညကတော့ ၁၄% လောက်ပဲ နိုင်မယ်လို့ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီ ပါတီတွေ အနေနဲ့ မဲရုံတိုင်းမှာ ကိုယ်စားလှယ် မထားနိုင်တဲ့ အတွက် မဲရုံအားလုံးရဲ့ ရေတွက်မှုကို မသိနိုင် ပေမယ့် အဲဒီညမှာတော့ ကိုယ်စားလှယ် အတော်များများက သူတို့အနေနဲ့ မဲအသာရ နေတယ်လို့ ယုံကြည်ခဲ့တာတော့ အမှန်ပဲ။
ဒါပေမယ့် အခြေအနေ တွေက စပြီး ပြောင်းကုန်တယ်။ မဲဆန္ဒနယ် တစ်ချို့မှာ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ဘက်က မဲရှုံးမယ့် အခြေအနေ ရှိတာနဲ့ မဲရေတွက်မှုကို ရပ်ဆိုင်း လိုက်တယ်လို့ ကိုယ်စားလှယ် အတော်များများက ပြောပြတယ်။ အဲဒီနေရာတွေမှာ စောင့်ကြည်သူတွေ မရှိဘဲ ထပ်မံ ရေတွက်တဲ့အခါ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေက နိုင်ကုန်ပြန်တယ်။ တစ်ချို့ မဲဆန္ဒနယ် တွေမှာတော့ ပြည်ခိုင်ဖြိုးကို ထောက်ခံတဲ့ ကြိုတင်မဲတွေ ဗြုန်းစားကြီး ပေါ်လာပြီး ပြည်ခိုင်ဖြိုး ကိုယ်စားလှယ် လောင်းတွေ နိုင်ကုန်တယ်။ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေက တစ်ချို့ ကြိုတင်မဲတွေဟာ မဲရုံပိတ်ပြီး နောက်မှာ ရောက်လာတာ ဖြစ်ပြီး ပထမပိုင်း ကြိုတင်မဲတွေတုံးက ပြည်ခိုင်ဖြိုး မနိုင်သေးဘူးလို့ ဆိုတယ်။
အားလုံ ခြုံကြည့်လိုက်ရင် ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင်တုံးက ကော်မရှင် ဥက္ကဌက ကြိုတင်မဲပေးမှုဟာ သိပ်မများပါဘူးလို့ ဆိုခဲ့ပေမယ့် တကယ်ကြတော့ ကြိုတင်မဲ ပေးမှုဟာ အတော်များတယ်လို့ ဆိုနိုင်တယ်။ တစ်ပြည်လုံး အတိုင်းအတာနဲ့ ကြိုတင်မဲ ဘယ်လောက် ရှိတယ် ဆိုတာတော့ အသေးစိတ် ထုတ်ပြန်တာ မရှိသေးဘူး။ (မဲဆန္ဒနယ် တစ်ခုချင်း အတွက် သတင်းစာများ၌ ဖော်ပြပြီး ဖြစ်ပါသည်။) နောက်ပြီး ကြိုတင်မဲ အများစုဟာ ပြည်ခိုင်ဖြိုး အတွက် ဖြစ်နေတာကို ထောက်ပြ တာတွေ ရှိပေမယ့် ဒီ ကြိုတင်မဲ ပေးသူ အများစုဟာ မဲဆန္ဒနယ်နဲ့ အဝေးမှာ တာဝန်ယူ နေရတဲ့ စစ်သားတွေ၊ ၀န်ထမ်းတွေနဲ့ ၀န်ထမ်း မိသားစု တွေဖြစ်လို့ သိပ်မဆန်းပါဘူး။ ဒီလူတွေကတော့ ဖိအားကြောင့် ဖြစ်ဖြစ်၊ သူတို့ ဆန္ဒအရ ဖြစ်ဖြစ် ပြည်ခိုင်ဖြိုးကိုပဲ ပေးကြမှာပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကြိုတင်မဲတွေ အရမ်းများတဲ့ အတွက် သံသယ ဖြစ်စရာတွေ ပေါ်လာတာတော့ အမှန်ပဲ။
အခန်း ၃။ ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်အပေါ် လေ့လာချက်။ ဒီစာတမ်းကို အပြီးသတ်ပြုစုတဲ့အချိန် ( နို ၁၇ ) မှာ ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ၃ နေရာ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် ၂ နေရာနဲ့ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ၁၂ နေရာအတွက် ရလဒ် တွေထုတ်ပြန်ဖို့ကျန်သေးတယ်လို့ စာတမ်းပြုစုသူက မှတ်ချက်ပေးထားပြီး ရလဒ်များကနေ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ နိုင်ငံရေး အခြေအနေများကို အခုလို သုံးသပ်ထားပါတယ်။
ပြည်ခိုင်ဖြိုး ပါတီဟာ အမျိုးသား လွှတ်တော်ရဲ့ ရွေးချယ်ခံနေရာ ၇၇ %၊ အောက်လွှတ်တော်ရဲ့ ရွေးချယ်ခံနေရာ ၇၉% မှာ အနိုင်ရ ထားပါတယ်။ လွှတ်တော် တစ်ရပ်ချင်း အလိုက် စုစုပေါင်း အမတ်နေရာများ (ရွေးချယ်ခံ + တိုက်ရိုက်ခန့်) နဲ့ တွက်ရင် လွှတ်တော် နှစ်ရပ်အတွင်း အာဏာ ချိန်ခွင်လျှာက အခုလို ဖြစ်နေပါတယ်။
အဲဒီလို ပြည်ခိုင်ဖြိုးက လွှတ်တော် နှစ်ရပ်လုံးမှာ အသာစီး ရထားတဲ့အတွက် ဥပဒေပြုရေးနဲ့ ပတ်သက်ရင် အခုလို အရေးကြီးတဲ့ အကျိုးဆက်တွေ ဖြစ်လာပါတယ်-
– အမျိုးသား လွှတ်တော်နဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် မှာပါတဲ့ ရွေးချယ်ခံ ကိုယ်စားလှယ်များက ဒုတိယ သမ္မတနှစ်ဦး အမည်စာရင်း တင်သွင်းတဲ့ အခါ ပြည်ခိုင်ဖြိုးက ရွေးချယ်တဲ့သူပဲ ဖြစ်မယ်။ (နောက် ဒုသမ္မတ တစ်ဦးကို တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ် တွေက တင်သွင်းမယ်။) ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် အနေနဲ့ ဒုသမ္မတ သုံးဦးထဲက သမ္မတ ရွေးတဲ့ အခါမှာလည်း ပြည်ခိုင်ဖြိုး အမတ်များက ထောက်ခံတဲ့လူပဲ သမ္မတ ဖြစ်တယ်။ ပြည်ခိုင်ဖြိုး အနေနဲ့ သူတို့ ကြိုက်တဲ့ သူကို သမ္မတ ဖြစ်အောင် လုပ်နိုင်စွမ်း ရှိသွားပြီ။
– ပြည်ခိုင်ဖြိုးက ထောက်ခံတဲ့ သမ္မတဟာ (၂၅% အမတ်နေရာကို ကိုင်ထားတဲ့) တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ထက် ဥပဒေပြု အာဏာ ပိုအင်အားကောင်း သွားမယ်။ သာမန် အများစုမဲနဲ့ အတည်ပြုလို့ ရတဲ့ ဥပဒေပြုရေး ကိစ္စများ အတွက် တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်များရဲ့ ထောက်ခံမှုကို ထည့်တွက်ဖို့ မလိုဘူး။
– ပြည်ခိုင်ဖြိုးနဲ့ တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ် ပေါင်းလိုက်ရင် ၇၅% ကျော်နေတဲ့ အတွက် သူတို့နှစ်ဖွဲ့ ပေါင်းပြီး အခြေခံ ဥပဒေကို ပြင်လို့ရတယ်။ အစိုးရ အဖွဲ့ဝင်တွေကို ပြစ်တင်စွတ်စွဲ ဖယ်ရှားလို့ ရမယ်။ ကျန်တဲ့ ပါတီတွေ ကျတော့ ပေါင်းလိုက်ရင် ၂၅% မပြည့်တဲ့ အတွက် အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ခြင်းကို ဟန့်တားလို့ မရတော့ဘူး၊ နောက်ပြီး အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ချက်ကို အဆိုတင်ဖို့၊ ပြစ်တင် စွက်စွဲဖို့အတွက် အဆိုတင်ဖို့၊ အရေးပေါ် လွှတ်တော် အစည်းအဝေး ခေါ်ဖို့ အနည်းဆုံး လိုတဲ့ မဲအရေအတွက် မပြည့်မီတော့ဘူး။
ဒါပေမယ့် တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ ပြည်နယ်လွှတ်တော် တွေမှာတော့ အခြေအနေက တစ်မျိုး ပြောင်းသွားတယ်။
မြန်မာ့ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်အပေါ် လေ့လာသုံးသပ်ချက် (၂)
တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ ပြည်နယ် လွှတ်တော် အားလုံးမှာ ရှိတဲ့ ရွေးချယ်ခံ ကိုယ်စားလှယ်များရဲ့ ၇၅% ကို ပြည်ခိုင်ဖြိ်ုးက နိုင်ပါတယ်။ တပ်မတော်သား အပါအ၀င် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် စုစုပေါင်းနဲ့ တွက်ရင် ပြည်ခိုင်ဖြိုးက ၅၆% နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒေသတစ်ခုချင်းကို ကြည့်ရင် အခြေအနေက အခုလို တစ်မျိုး ပြောင်းသွားတာကို မြင်နိုင်ပါတယ်-
ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၆၇%၊ တပ်မတော် ၂၅% ၊ တစည ၈%
ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၆၈% ၊ တပ်မတော် ၂၅% ၊ တစည ၅%၊ ကရင်ပြည်သူ့ပါတီ ၂%
ပြည်ခိုင်ဖြိုး၇၁%၊ တပ်မတော် ၂၅%၊ တစည ၄%
ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၇၃%၊ တပ်မတော် ၂၅%၊ အခြား၂%
ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၆၃%၊ တပ်မတော် ၂၅%၊ အခြား ၈%၊ ( အဖြေမရသေး ၂ နေရာ)
ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၇၁%၊ တပ်မတော် ၂၅%၊ တစည ၄%
ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၆၁%၊ တပ်မတော် ၂၅%၊ တစည ၆%၊ NDF ၄%၊ အခြား ၅%
ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၂၉%၊ တပ်မတော် ၂၅%၊ CPP ၂၁%၊ CNP ၂၁%၊ ENDP ၄%
ပြည်ခိုင်ဖြိုး၃၉%၊ တပ်မတော် ၂၅%၊ တစည ၂၂ %၊ SNDP ၈%၊ အခြား၆%
ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၇၅%၊ တပ်မတော် ၂၅%၊
ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၃၀%၊ တပ်မတော် ၂၅%၊ PSDP ၁၈%၊ KPP ၉%၊ AMRDP ၉%၊ အခြား ၉%
ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၄၆%၊ တပ်မတော် ၂၅%၊ AMRDP ၂၃%၊ တစည ၆%
ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၃၀%၊ တပ်မတော် ၂၅%၊ RNDP ၃၈% ၊ အခြား ၇%
ပြည်ခိုင်ဖြိုး၃၅%၊ တပ်မတော် ၂၅%၊ SNDP ၂၁ %၊ အခြား ၁၄% ( ၈ နေရာ ကျန်)
ဒါ့ကြောင့် ဗမာလူမျိုး အများစု နေထိုင်တဲ့ တိုင်းဒေသကြီးတွေမှာ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ပါတီဟာ အမျိုးသား လွှတ်တော်နဲ့ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်မှာလိုပဲ ဥပဒေပြု ရေးရာတွေမှာ တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ ထောက်ခံမှု မလိုပဲ လုပ်နိုင်မယ်၊ တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ ပေါင်းလိုက်ရင် ၇၅% ကျော် ရနေမယ် ဆိုတဲ့ အခြေအနေမှာ ရှိပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ပြည်နယ်တွေမှာတော့ အခြေအနေက တစ်မျိုး ပြောင်းသွားပါတယ်။ တိုင်းရင်းသား အများစု နေထိုင်တဲ့ ပြည်နယ်တွေမှာ ကယား ပြည်နယ်က လွဲရင် ပြည်ခိုင်ဖြိုးဟာ ၂၅% ကျော် နေရာ ရထားပေမယ့် အများစု နေရာ မရခဲ့ပါဘူး။ ဒီအခြေအနေကနေ အကျိုးဆက် နှစ်ခု ပေါ်ထွက် လာပါတယ်။ ပထမ အကျိုးဆက် ကတော့ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ပါတီဟာ သာမန် ဥပဒေကြမ်းတွေ အတည်ပြုနိုင်ဖို့ အတွက် လိုအပ်တဲ့ သာမန် အများစု ( Simple Majority) မဲအတွက် တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ် တွေကို မှီခိုရပါ့မယ်။ (အခု အချိန်မှာတော့ သူတို့ နှစ်ဖက်ရဲ့ အကျိုး စီးပွားတွေက တူညီ နေသေးတယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။) ဒါပေမယ့် ပြည်နယ် ၀န်ကြီးချုပ်ကို ပြစ်တင် စွပ်စွဲတာ၊ စုံစမ်းတာ လုပ်ဖို့အတွက် လုံလောက်တဲ့ အများစုမဲမရှိဘူး။ တိုင်းရင်းသား ပါတီတွေက သူတို့ကို တားဆီးလို့ ရတဲ့မဲ ရှိနေတယ်။ အရေးပေါ် လွှတ်တော် ခေါ်ဖို့ တောင်းဆိုခွင့် ရှိတဲ့မဲဟာ ပြည်ခိုင်ဖြိုး မှာရော၊ တိုင်းရင်းသား ပါတီတွေမှာရော ရှိနေတယ်။ ဒါဟာ တိုင်းရင်းသား ပါတီတွေကို လွှတ်တော်ထဲမှာ သူတို့ အရေးအရာတွေကို လုပ်နိုင်ဖို့ အတွက် အခွင့်အရေး ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှ တစ်ခု သတိပြု သင့်တာက ပြည်နယ် လွှတ်တော်တွေမှာ ပါဝင်လာတဲ့ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ကိုယ်စားလှယ် အများစုကြီးဟာ အဲဒီ ပြည်နယ်ထဲက တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုတွေ ဖြစ်တယ် ဆိုတာရယ်၊ အဲဒီထဲက အတော် များများဟာ ဒေသတွင်းမှာ ထင်ရှားတဲ့၊ လူရိုသေ ရှင်ရိုသေ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့ အချက်ပါပဲ။ တကယ်လည်း ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဟာ အဲဒီလူတွေကို ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ်ရဖို့ အတွက် အတော် ကြိုးစား လုပ်ထားရတာပါ။ ဒါ့ကြောင့် ဗဟိုက (ဗမာ အများစုပါတဲ့) ပြည်ခိုင်ဖြိုး ပါတီက ပြည်နယ် လွှတ်တော်တွေ အတွက် မူတွေ ချပေးတဲ့ တိုင်အောင် ပြည်နယ်နဲ့ လူမျိုးနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ကိစ္စ အတော်များများမှာ တိုင်းရင်းသား ကိုယ်စားလှယ်တွေကပဲ ဆုံးဖြတ်သွားမယ့် အခြေအနေ ရှိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီအကျိုးဆက် နှစ်ခုဟာ အနာဂတ်မှာ တိုင်းရင်းသား ရေးရာများနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်ကိစ္စတွေကို ကိုင်တွယ်မယ်၊ ဘယ်လို ကိုင်တွယ်မယ် ဆိုတဲ့ အချက်များကို ပြဋ္ဌာန်း ပေးသွားမှာ ဖြစ်တယ်။
တစ်ဖက်က သိသာ ထင်ရှား အရေးကြီးတဲ့ တိုးတက်မှု ရှိသလို တစ်ဖက်မှာလည်း တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တွေနဲ့ အစိုးရကြားက တင်းမာမှုတွေကလည်း အန္တရာယ်ရှိတဲ့ အခြေအနေကို ရောက်နေပါတယ်။ ကချင်တွေက နိုင်ငံရေး ဖြစ်စဉ်ထဲက ပထုတ် ခံထားရတယ်။ ကယား တိုင်းရင်းသား ပါတီတစ်ခုပဲ ၀င်ပြိုင်ပြီး တစ်နေရာမှ အရွေးမခံရဘူး။ ၀နဲ့ မိုင်းလားအဖွဲ့ တွေက ရွေးကောက်ပွဲမှာ ၀င်ပါဖို့ ငြင်းဆန်ခဲ့ပြီး ကရင် ပြည်နယ်မှာတော့ နယ်စပ်တလျှောက် တိုက်ပွဲတွေ ပြန်ဖြစ်နေပါပြီ။
နောက်တစ်ခု အရေးကြီးတာကတော့ ဥပဒေပြု လွှတ်တော်တွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကို လိုတာထက် ပိုပြီး မတွက်ဖို့ပါပဲ။ နိုင်ငံနဲ့ ပြည်နယ်တွေရဲ့ နေ့စဉ် အုပ်ချုပ်မှု ကိစ္စတွေကို လုပ်မှာက နိုင်ငံတော် အဆင့်မှာ သမ္မတနဲ့ သမ္မတက ခန့်ထားတဲ့ ၀န်ကြီးများ၊ ပြည်နယ် အဆင့်မှာ သမ္မတက ရွေးချယ်ထားတဲ့ ပြည်နယ် ၀န်ကြီးချုပ်နဲ့ သူက ခန့်ထားတဲ့ ၀န်ကြီးများ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ သူတွေဟာ အရွေးချယ်ခံ ကိုယ်စားလှယ် လောင်းတွေ ဖြစ်ဖို့မလိုသလို သူတို့ ခန့်ထားရေးကို ပိတ်ပင် တားဆီးဖို့ အတွက် လွှတ်တော်တွေမှာ အာဏာ နည်းနည်းပဲ ရှိပါတယ်။
အခန်း ၄ ။ ရှေ့ဆက်မယ့်ခရီး ။ အခန်း ၄ မှာတော့ ရွေးကောက်ပွဲလွန် ကာလနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အခုလို ဖော်ပြထားပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက် လွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွေ ကျင်းပဖို့၊ သမ္မတ ရွေးချယ်ဖို့၊ အစိုးရအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းဖို့တွေ လုပ်ဖို့ အတွက် ကြားမှာ သုံးလအချိန် ကြာဦးမှာပါ။ ဒီကာလမှာ လက်ရှိ အစိုးရကပဲ အုပ်ချုပ် နေဦးမှာ ဖြစ်ပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံဟာ အပြောင်း အလဲတွေနဲ့ မရေရာ မသေချာမှုတွေ အတော်များတဲ့ ကာလကို ဖြတ်သန်း ရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးပါတီ တွေဟာ မဲပေးမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အလွဲသုံးစား လုပ်မှု၊ အမြတ်ထုတ်မှုတွေရဲ့ အတိုင်းအတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အတော် စိတ်ပျက် သွားကြပေမယ့် အစထဲက ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်စဉ်မှာ အားနည်းချက်တွေ ရှိလိမ့်မယ်၊ ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာ ရှည်လျားပြီး ခက်ခဲ ကြမ်းတမ်းမယ့် နိုင်ငံရေး ဖြစ်စဉ်ရဲ့ ပထမအစပဲ ဖြစ်တယ် ဆိုတာကို သူတို့ လက်ခံထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ အခုအချိန်မှာ အများ လက်ခံ ထားတာကတော့ ဥပဒေအတိုင်း ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်ကို ကန့်ကွက်မယ် (အောင်မြင်ဖို့တော့ သိပ်မရှိဘူး) ဒါပေမယ့် လွှတ်တော် ကိုတော့ သပိတ် မမှောက်ဘူး ဆိုတဲ့ အယူအဆပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တော့ ဒီရွေးကောက်ပွဲရဲ့ အရေးပါမှုဟာ လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတစွာ ကျင်းပတယ်၊ မကျင်းပဘူး ဆိုတဲ့ အပေါ်မှာ အခြေမခံဘူး။ အရေးကြီးတဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေက တစ်ခြား နေရာမှာ ဖြစ်နေတယ်။ အခုဆိုရင် လွန်ခဲ့တဲ့ ရာစုနှစ် တစ်ဝက် လောက်အထိ မရခဲ့တဲ့ တရားဝင် နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးမှုတွေ ပြန်ဖြစ်လာပြီ။ (ပြည်တွင်း မီဒီယာတွေ မှာလည်း အတိုင်းအတာ တစ်ခု ရနေတယ်။) တပ်မတော်ထဲမှာ မျိုးဆက်လိုက် အပြောင်းအလဲတွေ စဖြစ်နေပြီ။ တပ်မတော်နဲ့ အစိုးရ အဖွဲ့ကြားမှာ တိတိကျကျ ပိုင်းခြား ထားတဲ့ စနစ် ပေါ်လာတော့မယ်၊ တိုင်းဒေသကြီးတွေနဲ့ ပြည်နယ်တွေမှာ လွှတ်တော်တွေ ပေါ်လာပြီး အောက်ခြေကို အာဏာ ခွဲဝေပေးတဲ့ စနစ် အကန့်အသတ်နဲ့ ပေါ်လာတော့မယ်။ တစ်ချို့ အပြောင်း အလဲတွေက ယာယီမျှသာ ဖြစ်ပြီး တစ်ချို့ ပြောင်းလဲမှုတွေ ကျပြန်တော့လည်း အပြုသဘော မဆောင်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ဖြစ်ပေါ် တိုးတက်မှုတွေ အားလုံး ကတော့ နှစ်ပေါင်းများစွာ အေးခဲ ရပ်တန့်နေတဲ့ အခြေအနေမှာ ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေ ဖော်ပြနေပါတယ်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ပြည်တွင်းမှာ စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေက ပြင်းထန်ေ နတယ်။ လူတွေက ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပြည်ခိုင်ဖြိုးက ကူလီကူလာ လုပ်ခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိတ်ပျက် ဒေါသထွက် နေသလို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်လာတဲ့ အပေါ်မှာလည်း စိတ်လှုပ်ရှား နေကြတယ်။ ဒါတွေ အားလုံးက အထိမခံတဲ့ အခြေအနေကို ဖန်တီးနေတာပဲ ဖြစ်တယ်။
ဒီလို အခြေအနေမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက် လာတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးခွန်းတွေ အများကြီး ပေါ်လာတယ်။ သူ့ကို လုပ်ကြံ သတ်ဖြတ် တော့မယ် ဆိုတဲ့ သတင်းကနေ သူ့ကို နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး ခန့်မယ် ဆိုတဲ့ သတင်းအထိ သတင်း မျိုးစုံ ထွက်လာတယ်။ (အဲဒီ ခန့်မှန်းချက် နှစ်ခုလုံးကတော့ ခိုင်မာတဲ့ အချက်တွေ အပေါ် အခြေခံထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။) ထင်ရှားတာ တစ်ခုကတော့ အစိုးရက သူ့ကို လွှတ်ပေး လိုက်တာဟာ ရွေးကောက်ပွဲကို သူတို့ ဖြစ်စေချင်တဲ့ ရလဒ်အတိုင်း ဖြစ်အောင် လုပ်နိုင်တဲ့ အတွက် ရလာတဲ့ ယုံကြည်မှုနဲ့ အင်အား ခိုင်မာမှုအပေါ် အခြေခံပြီး လုပ်တာ ဆိုတာပဲ ဖြစ်တယ်။ သူတို့ ဘက်က နိုင်ငံရေး အပေးအယူ လုပ်ဖို့ အခွင့်အလမ်း နည်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ဘာသာ သူတို့ဆုံးဖြတ်ပြီး နိုင်ငံတကာနဲ့ ပိုမို ထိတွေ့တာတို့၊ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား တစ်ချို့ လွှတ်ပေး တာမျိုးတော့ လုပ်ဖို့ ရှိချင်ရှိ ပါလိမ့်မယ်။ အရင်တုံးကလည်း သူတို့ အားကောင်းတယ်လို့ ထင်တဲ့ အချိန်မှာ ဒါမျိုး လုပ်ဖူးပါတယ်။
၂၀၀၂ ခုနှစ်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လွှတ်ပေးတုံးကတော့ အစိုးရအနေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ လူထုအပေါ် ဆွဲဆောင်မှု ကျဆင်းသွားပြီ၊ အင်န်အယ်လ်ဒီရဲ့ စွမ်းရည်လည်း ကျဆင်း သွားပြီလို့ ထင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ခရီးစဉ်တွေမှာ လူတွေ ထောင်သောင်းချီပြီး ကြိုဆိုတာကို တွေ့တော့ တုန်လှုပ် သွားခဲ့ရတယ်။ အစိုးရအနေနဲ့ ဒီတစ်ခါတော့ အဲဒီလို ဒုတိယ အကြိမ် ထပ်ပြီး အငိုက် ဖမ်းခံတော့မှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒီတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပေါ် လူထုက အကြီးအကျယ် ထောက်ခံလာမှုတွေ ဖြစ်လာရင် အစိုးရ ဘယ်လို ကိုင်တွယ်မလဲ ဆိုတာ စဉ်းစားစရာ ဖြစ်လာတယ်။
အခန်း ၅။ သုံးသပ်ချက်။ အခန်း ၅ မှာ စာတမ်းရှင်က စာတမ်း တစ်ခုလုံးမှာ ဖော်ပြထားချက်များနဲ့ပတ်သက်ပြီး အခုလို သုံးသပ် ထားပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံက နိုင်ငံရေး ပါတီတွေကတော့ ရှေ့ကို မျှော်ကြည့်ပြီး နည်းနည်း ပါးပါး ရထားတဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေကို မဟာ ဗျူဟာမြောက် အသုံးချနိုင်ဖို့ ဆုံးဖြတ် ထားကြပြီး ဖြစ်တယ်။ သူတို့က ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်ကို စိန်ခေါ်နေမှာ ဖြစ်ပေမယ့် သူတို့ အနာဂတ်အတွက် မဟာဗျူဟာကို ဒီအချက်ပေါ်မှာ အခြေခံမထားဘူး။ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀န်း အနေနဲ့ ဒီနိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့ ချဉ်းကပ်ပုံ နည်းလမ်းကို နားလည်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
ဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောနေကြစကား၊ ခံတွင်း တွေ့နေတဲ့ စကားဖြစ်တဲ့ အတုအယောင် ကိစ္စပဲ၊ ဘာတစ်ခုမှ ပြောင်းလဲမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ စကားဟာ ဘယ်လိုမှ အလုပ် ဖြစ်အောင် အကူအညီ မပေးနိုင်ဘူး။ ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်က ယုံကြည် စိတ်ချရမှု မရှိဘူး ဆိုပေမယ့် အပြောင်းအလဲဖြစ်နေတဲ့ အရာတွေအများကြီးရှိနေတယ်။ မြန်မာ့အရေး အတွက် ပြင်းပြင်း ထန်ထန် ပြောနေသူ အချို့အတွက် မြင်နိုင်ဖို့ အချိန်ယူ ရကောင်း ယူရဦးမှာ ဖြစ်ပေမယ့် သိသာ ထင်ရှားတဲ့ နိုင်ငံရေး အခင်းအကျင်း ပြောင်းလဲမှုတွေ ပုံပေါ်လာ နေတာတော့ အသေအချာပဲ။ အစိုးရနဲ့ အစိုးရ ဖွဲ့စည်း တည်ဆောက် ပုံတွေဟာ စပြီး ပြောင်းလဲ နေပြီ။ အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှုတွေ အားကောင်း လာတယ်။ ဇာတ်ကောင် အသစ်တွေနဲ့ အမြင်သစ်တွေ ပေါ်ထွက် လာနေတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကလည်း အဲဒီလို အခင်း အကျင်းထဲကို ၀င်လာပြီ။ တိုင်းရင်းသား ရေးရာ ကိစ္စတွေက ပိုပြီး ရှုပ်ထွေး လာတယ်။ တစ်ချို့ တိုင်းရင်းသား ပါတီတွေက ရွေးကောက်ပွဲမှာ အခြေအနေ ကောင်းတယ်။ တစ်ချို့က ရွေးကောက်ပွဲကို လက်မခံဘူး။ နယ်စပ်မှာလည်း တင်းမာမှုတွေ ပြန်ဖြစ်လာတယ်။ ဒါတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေး အခင်းအကျင်း ပြောင်းလဲ လာမှုတွေပဲ။
အဲဒီ နိုင်ငံရေး ဖြစ်စဉ်တွေကို မစူးစမ်းဘဲ မျက်စိမှိတ် အပြစ်တင် မနေဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀န်း အနေနဲ့ အစိုးရ၊ အတိုက်အခံနဲ့ လူမျိုးစုတွေဆိုတဲ့ သုံးပွင့်ဆိုင် ဘောင်အပြင်ဘက်မှာ နောက်ထပ် အသံတွေ အများကြီး ရှိသေးတယ် ဆိုတာကို အသိအမှတ် ပြုဖို့လိုပါတယ်။ အဲဒီ အသံတွေကိုလည်း နားထောင်ဖို့ လိုပါတယ်။ အဲဒီလို မလုပ်ရင်တော့ အတိတ်တုံးက ရှိခဲ့တယ် အစွန်းရောက်မှုတွေကို လျော့ပါးသွားအောင် လုပ်မယ့်အစား ပိုပြီး အားကောင်း လာအောင် လုပ်ပေးသလို ဖြစ်သွား ပါလိမ့်မယ်။
Posted on December 5, 2010, in Uncategorized and tagged ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ် သှံးသပ်ချပ်. Bookmark the permalink.	Leaveacomment.	← Mr.Bill Gate ထံသို့ အိတ်ဖွင့်စာ	Ka Nu’ Inn Nuam →	Leaveacomment